U-Yulia Proskuryakova nendodakazi yakhe, izithombe ezintsha, i-Twitter
Ngenyanga edlule, umka-Igor Nikolaev wazala indodakazi yakhe. Umculi wayekhona ngaleso sikhathi eSochi, futhi izindaba ezimnandi zakamuva zambamba ngemuva kwezinto "ze-Wave entsha". Umqambi odumile wayehalalisiwe bonke osebenza nabo usuku lonke, ngoba kwakwaziwa ukuthi uNikolaev noPskukuakova baphupha ngengane yezingane eziyishumi.
Ingane ibizwa ngokuthi iVeronica. Indodakazi endala yomculi, uJulia, enkulumweni yamuva yatshela ukuthi udadewabo omncane ufana noyise wakhe. Izolo uVerkaka Igorevna kanye nabazali bakhe babike usuku lokuqala lokuzalwa - intombazane yaphenduka inyanga yonke! Kulesi senzakalo, umama wentombazane wabeka izithombe ezimbili ezinhlakeni ekhasini lakhe le-twitter. Awukwazi ukubona ubuso bukaVeronica ezithombeni, kodwa ungabona ukuthi yena, olele embhedeni, usekela ngobumnene izandla zikababa nomama. Indodakazi ka-Igor Nikolaev noJulia Proskuryakova igqoke izigqoko ezimhlophe ezimhlophe, lapho kubhaliwe khona: "Imbali encane kababa".
U-Anastasia Kostenko ugqoke izinto zika-Olga Buzovoy, isithombe
U-Nikolai Baskov wadala iStas Kostyushkin, ividiyo
UBozenhen Rynsky uzoshushiswa yiHhovisi likaMshushisi Jikelele
USvatlana Khodchenkova noGeorgy Petrishin bahlukanisa izindlela
Abekho abantu abangathandekayo emhlabeni, izifiso zabo njengamlando amaplanethi
I-Pynzary zama ukuvumelanisa uKsenia Borodina no-Kurban Omarov, isithombe
Ingabe owesifazane onamandla angathola uthando?
Ukwandisa umkhuhlane we-tincture we-propolis
"Isaladi yamaGreki" iresiphi yesicoco
Yenza izifundo zokwenza amehlo obala
Okufanele ukwenze uma konke kubi futhi akukho lutho olusebenzayo
I-Horoscope ngo-September 2016 ye-Aries
Ukuthembela komsebenzi ngobuhle
Amavesi amfushane mayelana nentwasahlobo yokukhanda ngekhanda - izingane zasenkulisa, izingane ezineminyaka engu-6-7 no-8-9 - esikoleni, enkulisa - Izinkondlo ezinhle ezitholakala entwasahlobo evela ezimbongi zaseRashiya - uPushkin, u-Agniya Barto
Ikhishi elincane: imithetho emithathu yokuklama okusebenzayo